पोखरा, माघ ८–गण्डकी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) कास्की अध्यक्ष मिलन गुरुङले ठगी गरेकाले झापड हानेको बताएका छन् । बुधबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सांसद मनाङेले अध्यक्ष गुरुङले बदमासी गरेकाले हात हालेको बताएका हुन् । मंगलबार लेखनाथको भण्डारढिकमा आयोजित मुख्यमन्त्री फुटबल कपको उद्घाटनका क्रममा अध्यक्ष गुरुङलाई उनले झापड हानेका थिए । सांसद मनाङेले अध्यक्ष गुरुङले ठगी गर्दै हिँडेको आरोप लगाउँदै भने, ‘आफैं ठग्ने ढाँट्ने अनि पत्रकार सम्मेलन गर्दै हिँड्ने ? जिल्लाबाट आएका खेलाडीले दुःख पाउँदा मैले चुप लागेर बस्नुपर्ने हो ?’
तपाईंले त हातपात गर्नुभयो रे, सांसदजस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्तिले हातपात गर्नु सही हो र ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘ठगलाई नपिटेर पूजा गर्नुपर्ने हो ? एन्फाबाट आएको पैसा खाएर खेलाडीलाई दुःख दिनेलाई किन सम्मान गर्ने ? अनि मैले धेरै पत्रकार साथीहरूलाई भनेको छु, मैले हातपात गरेको होइन कुटेको हुँ ।’ ‘यस्ता ठगहरूलाई तपाईंले नि कुट्नुस् । ४ गते खेल हुन्छ भनेर बोलाउने अनि फेरि खेल ७ गतेलाई सार्ने, अनि टाइसिटमा पनि फिक्सिङ गर्ने,’ उनले भने, ‘खेलाडीलाई लजिङ, फुडिङको व्यवस्था नगर्ने, खेल मैदान उपलब्ध नगराउने अनि ठूलोठूलो कुरा गरेर हुन्छ ? म नभएको भए त मेरा बच्चाहरूको बिचल्ली हुन्थ्यो । धन्न म पोखरामा नै थिएँ । अझै ठूलोठूलो कुरा गर्छ उसले, अनि कसरी सहने ?’
सांसद मनाङले थपे, ‘त्यस्तालाई कुटेर नै ठीक पार्ने हो । यसले मुख्य मन्त्रीको समेत बेइज्जत गरेको छ । मलाई कुटेकोमा कुनै पछुतो छैन । तपाईंहरूलाई कुटेर बेठीक गर्यो भन्ने लाग्छ भने त्यो तपाईंहरूको समस्या हो ।’ कार्यक्रममा सांसद मनाङसँगै एन्फा मनाङका अध्यक्ष र एन्फा मनाङका अध्यक्ष निरज गुरुङको पनि उपस्थिति थियो । अध्यक्ष निरज गुरुङले पनि अध्यक्ष मिलनले गल्ती गरेको बताए । सांसद मनाङेले राखेको प्रेसमिटमा अध्यक्ष मिलनको चेक बाउन्सको फोटोकपीसमेत देखाइएको थियो । ‘बाउन्स चेक देखाउँदै सांसद मनाङले भने, ‘त्यो ठग रहेछ, त्यसका यस्ता ठगीका ५० मुद्दा रहेछन् ।’
डेढ करोडभन्दा बढी मूल्यका अवैध मोबाइलसहित दुई जना पक्राउ